Prof. Ismaaciil Diiriye Gamaadiid: “Waxaan ahay musharrax Xildhibaan Puntland, Gobolka Cayn” – Radio Daljir
Juunyo 7, 2018 12:17 g 0
Prof Ismaaciil Diiriye Gamaadiid oo ah aqoonyahan ka soojeeda gobolka Cayn, kana baxay Jaamacadda Oxford University, ayaa waraysi uu siiyey Radio Daljir waxa uu kaga hadlay nooca xildhibaan ee Puntland u baahan tahay doorashada soo socota.
Aqoonyahanka ayaa faray odayaasha soo xulaya baarlamaanka in ay ku soo xulaan xildhibaanadda aqoon iyo daacadnimo. Prof Ismaaciil ayaa sheegay mowqifkiisa kamid noqoshada baarlamaanka cusub ee Puntland yeelanayso dhammaadka sannadkan.
Khadar Cawl ayuu u waramay.
Diinyaqaanka Somaliland oo u fadwooday Muuse Biixi: “Halkii aad nagu jihayso dadku waa ku khasbanyahay!”